အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: With Thousands of Kisses.........Khin
Posted by တီချမ်း at 5:13 AM
yin December 6, 2011 at 6:42 PM
တီချမ်း စာပြန်ရေးတာ ဝမ်းသာတယ်။ စာရေးကောင်းလို့တီချမ်းစာတွေ အကုန်ဖတ်ဖြစ်တယ်။ ဟို တလောက ပျောက်နေလို့စိတ်ပူနေသေးတာ။
တီချမ်း December 7, 2011 at 5:26 AM
Nang Nyi, Khine Soe Lung, Sydney MayThu KyiSoe and 8 others like this.
Aye Myat Myat Ko စာရွက် ဘော့ပင်နဲ့ နောက်ဆုံးရေးခဲ့တာ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကမှ... လက်တဝါးစာ စာရွက်ကလေးပေါ်မှာ ဟိုဘက် သည်ဘက် အပြည့်ရေးပေးလိုက်တယ်။
Aye Myat Myat Ko သိနေကြပါလား =D =D =D
Khin Win Myat Hi Addy, very good. Thanks for tagging me , love the headline.
Mya Thet Su Maw Nice Thoughts
Ma Su Mon great post!
Thet Nandar Pls upload yr mom's pic!
Ei Ei Khin စာရွက်နဲ့ဘောတံနဲ့ က ယနေ့နေ့ ခင်းအထိ ထိတုန်း။ လူနာဖိုင်တွေက အားလုံး ကွန်ပျူတာရိုက်စ် မဖြစ်နိုင်သေးပါ။
သို့ သော်ငြား ရက်ချိန်းက ဂလက်စီပေါ်တွင် မှတ်ပြီး ရက်ဂြစ်စတာက ပန်းသီးပေါ် တင်ထားကြောင်း ... (ကြုံတုန်း ကြွားတယ်လို့မထင်ပါနှင့်)
Victor Feng · 14 mutual friends
richard branson ကတော့ အီးမေးလ်တောင် သိပ်မသုံးဘူးဆိုပဲ၊ စာရွက်ပေါ်မှာ လက်နဲ့ရေးပြီး စာတိုက်ကပို့သတဲ့..
Nang Nyi နေဦး အရင်လိုက်ခ်ထားမယ် .. နောက်မှ ပြန်လာဖတ်ဦးမယ်.. ခုက rush ဖြစ်နေတယ်
Addy Chen ဆိုလိုတာက ဘာရေးရေး ကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်း လိုက်ခ်တယ်ပေါ့လေ အဲ့တာ အဂတိ မိညီမ Nang Nyi
Addy Chen အကတိ
တီချမ်း December 7, 2011 at 5:27 AM
1 person liked this - Hnin Mon
Hnin Mon - အရမ်းကြိုက်တယ်။ Your Article of the year ;)12/6